ဗျာဒိတ်တော်လမ်းပြမြေပုံ - ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်
ပထမဦးစွာ၊ ဤသည်မှာ သင်စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုနေစဉ် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကို မြင့်မားသောအဆင့်လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည့် ပုံကြမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော အလားတူပုံငယ်တစ်ပုံ)။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ပုံကြမ်း
If you need this diagram above translated into your preferred language, you can visit this ဘာသာပြန်ထားသော ဗျာဒိတ်ကျမ်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ပုံကြမ်း page.
ဗျာဒိတ်လမ်းပြမြေပုံမှတဆင့် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ သမိုင်းဝင်ရှုထောင့်-
ဒုတိယအနေနှင့်၊ ဤနေရာတွင် ဒံယေလ၊ ဓမ္မဟောင်း၊ နှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတို့မှ သင်္ကေတအချို့ကို ပြသသည့် မတူညီသောအဆင့်မြင့်ကားချပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏သင်္ကေတများသည် သမိုင်းတွင် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း၊ ဤဇယား-ပုံသည် ၎င်းတို့အား သမိုင်းဝင်အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယေရှုခရစ်၊ သူ၏ဧဝံဂေလိတရားနှင့် ဘုရားသခင်၏လူအစစ်အမှန်များကို တွန်းလှန်ရာတွင် ဤဝိညာဉ်အမျိုးအစားများ အပျံ့နှံ့ဆုံးအချိန်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဧဝံဂေလိနေ့၏ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြရန်ဖြစ်သည်။ (ရုပ်ပုံ၏ နောက်ထပ်အရွယ်အစားဗားရှင်းကို ရယူရန် ပုံကို နှိပ်ပါ။)
“ဧဝံဂေလိနေ့” ၏သမိုင်းဝင်ဇာတ်ကြောင်းကို (သခင်ယေရှုမြေကြီးပေါ်ရှိစဉ်မှစ၍ အဆုံးတိုင်အောင်) ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်းတွင် မတူညီသောရှုထောင့်ခုနစ်ခုမှ ခုနစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောပြသည်။ အကြောင်းမူကား ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် များစွာသော “ခုနစ်ပါးသောကျမ်း” ဖြစ်၏။
သမိုင်းတစ်လျှောက် “အသင်းတော်သည် ဝိညာဉ်ရေးတွင်ရှိနေသည့်နေရာ” ရှုထောင့်မှ အာရှတိုက်၏အသင်းတော်ခုနစ်ခု (အခန်း ၂ နှင့် ၃)
သိုးသငယ်၏အသွေးဖြင့် ဆေးကြောသောသူများသာ မြင်နိုင်သည့်ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်- တံဆိပ်ခုနစ်ခုကိုဖွင့်ပါ။ (အခန်း ၆-၈)
ဘုရားသခင့်လူမျိုးကိုသတိပေးဖို့ ဘိသိက်ခံဓမ္မအမှုတစ်ခုရဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီး သူတို့ကို စစ်တိုက်ဖို့ စည်းဝေးခေါ်ပါ– ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါးတို့သည် တံပိုးမှုတ်၍၊ (အခန်း ၈-၁၁)
ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ဗိ​မာန်​တော်၊ ယဇ်​ပ​လ္လင်​နှင့်​ထို​အ​ရပ်​ကို​ကိုး​ကွယ်​သော​သူ​တို့​ကို​တိုင်းတာ​ခြင်း​အ​တွက်- စာတန်၏လှည့်စားမှုများကို ဆန့်ကျင်သည့် သက်သေနှစ်ဦး (နှုတ်ကပါဌ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်) တိုက်ပွဲ (အခန်း ၁၁)
ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ ဘုရားကျောင်းနှင့်သားရဲများအကြားတိုက်ပွဲ (အခန်း ၁၂ နှင့် ၁၃)
နေရာယူမှု ရှုထောင့်ကနေပါ။ သစ္စာမရှိသောပြည်တန်ဆာ၊ ဗာဗုလုန်အပေါ် နောက်ဆုံးစီရင်ချက်နှင့် သမိုင်းတစ်လျှောက် သူမ၏ လူသတ်လှည့်ဖြားမှု (အခန်း ၁၇)
ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​ပလ္လင်​တော်​ရှု​ထောင့်​မှ​စ​၍ ဗာ​ဗု​လုန်​နှင့်​သား​ရဲ​၏​လှည့်​စား​ခြင်း​မှ​လွတ်​မြောက်​ကြ​သော​သူ​တို့​အ​တွက်— ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏စစ်မှန်သောသမိုင်း။ ဒါဟာ စာတန်နဲ့ ဘုရားရဲ့လူမျိုးကြားက တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲ၊. (အခန်း 20)
မှတ်ချက်- သမိုင်းရှုထောင့်၏ ရှင်းလင်းချက်အပြည့်အစုံကို သင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်- “ဗျာဒိတ်တော် သမိုင်းမှတ်တမ်း”
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ “ကျည်ဆန်အမှတ်” လမ်းပြမြေပုံ (အခန်းအလိုက် အခန်းတစ်ခန်း)။ ၎င်းတွင် ထပ်လောင်းရှင်းပြထားသည့် ဤဘလော့ဂ်ရှိ ပို့စ်များသို့ လင့်ခ်များပါရှိသည်။
သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အား လုံးလုံးလျားလျား ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် (အခန်း ၁)
ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာကို မည်သူအား လိပ်မူသနည်း။
ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ၇ ပါးဖြင့် အသင်းတော် ၇ ပါးအား ထုတ်ဖော်ပြသရန်ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် သစ္စာရှိသက်သေအဖြစ် ထင်ရှားသည်။
ယောဟန်သည် ဧဝံဂေလိ တံပိုးမှုတ်ကြီးကို ကြားသည်။
ယေရှုသည် ယောဟန်အား ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ယောဟန်အား အသင်းတော်ခုနစ်ပါးထံ သတင်းစကားပေးပို့ရန် ခန့်အပ်ခံရသည်။
အသင်းတော်ခုနစ်ပါးကို ယေရှုက ဝိညာဉ်ရေးအရ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာ သိစေတယ် (အခန်း ၂ နဲ့ ၃)
ဧဖက်မြို့သား မင်းရဲ့ အချစ်ဦးကို ထားခဲ့လိုက်ပါ။
Smyrna သည် သင်တို့တွင် အတုအယောင်များ ရှိနေပြီး သင်သည် ဒုက္ခရောက်လိမ့်မည်။
ပေရဂမုတ်၊ စာတန်၏ပလ္လင်ကို သင်တို့တွင် တည်စေပြီ။
သွာတိရသည် မိစ္ဆာပရောဖက်မ ယေဇဗေလကို မရိုသေ
သာဒိက မင်းနာမည်တစ်ခုတောင်းပေမယ့် မင်းတကယ်သေသွားပြီ
Philadelphia မင်းမှာ ခွန်အားနည်းနည်းရှိပေမယ့် သတိထားပါ။
လောဒိကိ သင်သည် ချမ်းသာသည်ဟု ထင်သော်လည်း၊ သင်သည် အမှန်တကယ် ဆင်းရဲသည်။
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ ယောဟန်သည် ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ပတ်လည်၌ ကိုးကွယ်သည် (အခန်း ၄)၊
ပလ္လင်တော်ပတ်လည်၌ အသက်ကြီးသူ ၂၄ ပါးရှိသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ခုနစ်ပါးတည်းဟူသော မီးခွက် ခုနစ်လုံး၊
ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကို ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်၌ ထင်ရှားစေသည် (အခန်း ၅)
ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်မှတပါး မည်သည့်တံဆိပ်ကိုမျှ မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။
သိုးသငယ်တွင် မျက်လုံးခုနစ်လုံးရှိပြီး ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် ခုနစ်ပါးရှိသည်။
မရေမတွက်နိုင်သော ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် သိုးသငယ်ကို ကိုးကွယ်နေပါသည်။
တံဆိပ်ခုနစ်ခုကို ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဖွင့်ထားသည် (အခန်း ၆-၈)
ပထမ တံဆိပ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အနိုင်ယူရန် မြင်းဖြူစီးသူ ထွက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့လိုက်ရသည်။ - ခရစ်တော်၏ရူပါရုံနှင့် သူ၏ဧဝံဂေလိတရားသည် ထွက်ပေါ်နေပါသည်။
ဒုတိယ တံဆိပ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် မြင်းနီစီးသူသည် ဓားရှည်ကြီးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ယူဆောင်သွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ - လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ဓားကို သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ထိန်းချုပ်မှုမှ နှုတ်ယူသောအခါ ဖြစ်ပျက်သွားသော ရူပါရုံတစ်ခု၊ သို့မှသာ နှုတ်ကပတ်တော်ကို မိမိတို့အကျိုးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
တတိယတံဆိပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပြီး လက်ထဲမှာ စကေးတစ်ခုကိုင်ထားတဲ့ မြင်းနက်စီးသမားကို တွေ့တယ်။ - တရားဟောသူများသည် ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အစုံကို လူများထံမှ ဖုံးကွယ်ထားကာ ဝိညာဉ်ရေးအရ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန် လုံလောက်သည့်အလုံအလောက် ပေးဆောင်သည့်အခါ ဖြစ်ပျက်နေသည့် ရူပါရုံတစ်ခု။
စတုတ္ထတံဆိပ်ကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် မီးခိုးရောင်မြင်းစီးသူသည် သေမင်းနှင့် ငရဲနောက်သို့ လိုက်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့လိုက်ရသည်။ – ခေါင်းဆောင်များသည် လူများကို ခြယ်လှယ်ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား ၎င်းဖြင့် ညှဉ်းဆဲနိုင်စေရန် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ယိုယွင်းသောအခါ ဖြစ်ပျက်သွားသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခု။
ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ပြီး သူတို့ရဲ့သက်သေခံချက်အတွက် အသေခံထားတဲ့ ယဇ်ပလ္လင်အောက်မှာ ဝိညာဉ်တွေကို ငါတို့တွေ့တယ်။ - အနီရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့် မီးခိုးရောင်မြင်းစီးသူများသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ရလဒ်၏ရူပါရုံ။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းသတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဆဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ပြီး ပြင်းထန်သောငလျင်တစ်ခုလှုပ်သွားပါသည်။ - စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခုသည် သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ခြင်းဆန့်ကျင်ဘက် ဧဝံဂေလိအမှန်တရားအပြည့်အစုံကို ထပ်မံဟောပြောသောအခါ ဖြစ်ပျက်သွားသည့် ရူပါရုံ။
သတ္တမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ပြီး ကောင်းကင်မှာ နာရီဝက်လောက် တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ - နောက်ဆုံးဧဝံဂေလိတရားနေ့တိုက်ပွဲအတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့လူစစ်တွေကို တစ်ဖန်ပြန်လည်စုစည်းခြင်းဆိုင်ရာ ရူပါရုံ။
တံပိုးမှုတ်သော ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါးမှ တစ်ခုစီသည် ၎င်းတို့၏ တံပိုးကို မှုတ်ကြသည် (အခန်း ၈-၁၁)
ပထမ Trumpet Angel အသံနှင့် သစ်ပင်သုံးပုံတစ်ပုံ မီးလောင်သွားခဲ့သည်။ - ဧဝံဂေလိတရား အပြည့်အစုံ ဟောကြားသောအခါ၊ မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ ညစ်ညမ်းသော အညစ်အကြေးများကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း။
ဒုတိယ တံပိုးမှုတ်တဲ့ အိန်ဂျယ်အသံက တောက်လောင်နေတဲ့ တောင်ကြီးရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို ပင်လယ်ထဲ ပစ်ချလိုက်တယ်။ - ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခု အမှန်တကယ် ပြိုလဲပြီး ယိုယွင်းပျက်စီးသွားကြောင်း ပြသသည့်အခါ ဖြစ်ပျက်လာပုံကို ထုတ်ဖော်ပါ။
တတိယ တံပိုးမှုတ်တဲ့ အိန်ဂျယ်အသံက ကောင်းကင်ကနေ ကြယ်တစ်ပွင့် ကြွေကျပြီး စီးဆင်းနေတဲ့ ရေရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကို ခါးစေပါတယ်။ - သာသနာပြုလူအမျိုးအစားသည် ယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီး စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားကို ခါးသီးပြီး အဆိပ်သင့်စေသည့် ဘာသာပြန်သူများကို သာသနာပြုအမျိုးအစားအဖြစ် ပြသသည့်အခါ ဖြစ်ပျက်လာပုံကို ထုတ်ဖော်ပါ။
စတုထ္ထတံပိုး အိန်ဂျယ်အသံသည် နေ၊ လနှင့် ကြယ်သုံးပုံတစ်ပုံသည် မှောင်နေသည်။ - မှားယွင်းသောဓမ္မအမှုတစ်ခုသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏သွန်သင်ချက်များကို မည်းမှောင်စေပြီး မှားယွင်းသောဓမ္မအမှုတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို ထုတ်ဖော်ပါ။
ပဉ္စမတံပိုးအိန်ဂျယ်အသံနှင့် ကောင်းကင်မှအခြားကြယ်သည် အောက်ခြေမရှိသောတွင်းထဲသို့ သော့ဖြင့်ကျနေသည်။ - ပြိုလဲသွားသောဓမ္မအမှုတစ်ခုသည် စာတန်၏ပြီးပြည့်စုံသောမုသားများအတွက် တံခါးများဖွင့်ထားသောအခါ ဘာဖြစ်သွားသနည်း၊ ထို့ကြောင့် နတ်ဆိုးများသည် အသင်းတော်များကြားတွင် အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း။
ဆဌမမြောက် တံပိုးနတ်သမီး အသံနှင့် သွေးသည် ရွှေယဇ်ပလ္လင်မှ အသံထွက်သည်။ - ဖောက်ပြန်နေသော ဝန်ကြီးဌာန၏ သွေးသားအပြစ်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်း။
Seventh Trumpet Angel သည် နိုင်ငံအားလုံးကို ဘုရားသခင်ပိုင်ကြောင်း ကြေညာရန် အသံထွက်သည်။ - ဘုရားသခင်သည် ချုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသပြီး သူသည် သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် သူ၏ လူစစ်များအတွင်း လုပ်ဆောင်နေသော၊ မှားယွင်းသော အရာအားလုံးကို ဖော်ထုတ်ပြီး လွတ်မြောက်ရန် ရိုးသားသော ဝိညာဉ်များကို ပြသသည်။
သားရဲများကို သားရဲအမှတ်အသားဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြသသည် (အခန်း ၁၂-၁၃)၊
စစ်မှန်သောဘုရားကျောင်း၊ – ဘုရားတရားမဲ့လူမျိုးနှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ ခေါင်းဆောင်များမှတစ်ဆင့် စာတန်လုပ်ဆောင်ပုံကို ဖော်ပြခြင်း။
Tနဂါးသည် ရှုံး၍ အသင်းတော်၏ ကောင်းကင်ဘုံမှ နှင်ထုတ်ခံရ၏။ - စိတ်နှလုံးအတွက် စစ်တိုက်ပုံနှင့် စာတန်သည် စိတ်နှလုံးထဲမှ နှင်ထုတ်ခံရသောအခါတွင် ယေရှုသည် သူ၏ မှန်ကန်သောပလ္လင်ကို သိမ်းပိုက်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
သားရဲသည် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုကာ အသင်းတော်ကို ညှဉ်းဆဲရန် ထလာသည်။ - ဓမ္မအမှုတစ်ခုပြိုလဲပြီး မြေကြီးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်အတွက် ဆိုးသွမ်းသောအုပ်စိုးရှင်များနှင့် ဧဝံဂေလိတရားကို စတင်ဈေးဆစ်သောအခါတွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာကို ဖော်ပြသည်။
သိုးသငယ်ကဲ့သို့ ချိုနှစ်ချောင်းရှိသော သားရဲသည် လှည့်စား၍ သတ်တတ်၏။ - စိတ်ဝိညာဉ်များကို လှည့်ဖြားရန်နှင့် ၎င်းတို့တွင်ရှိသော ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားရန် ဧဝံဂေလိတရားအား အကျဆုံးသော ဓမ္မဆရာ မည်မျှအား အသုံးချခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ဟိ သားရဲ၏အမှတ်အသား လူတွေအပေါ် ရေတွက်သည်။ နှင့် ချိန်တွယ်သည်။
ဘုရား​သခင့်​လူ​စစ်​တွေ​ကို ဖော်ထုတ်​ပြီး ဘုရား​သခင့်​အမျက်​တော်​ကို သွန်း​လောင်း​ဖို့ အသင့်​ဖြစ်​နေ (အခန်း ၁၄-၁၅)၊
သားရဲဖြင့် မှတ်သားထားသူတို့အပေါ် ကြီးစွာသော အမျက်ဒေါသကို သတိပြုပါ။
လူသားသည် အသီးအနှံကို ရိတ်တတ်၏။
စပျစ်သီးကို ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်၏ ပြင်းစွာသော စပျစ်ရည်အတွက် စုဆောင်းထားသည်။
ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​အ​မျက်​တော် ဖန်​လုံး​ခု​နစ်​လုံး​ကို သွန်​ချ​သည် (အခန်း ၁၆)
ပထမပုလင်းကို မြေကြီးပေါ်သို့ သွန်ပစ်လိုက်သည်။ – ဇာတိပကတိ၊ အာရုံငါးပါးနှင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ စိတ်ထားရှိသူများအပေါ် ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်၏ တရားစီရင်ချက်။
ဒုတိယပုလင်းကို ပင်လယ်ထဲ သွန်ချလိုက်တယ်။ – ဘုရားသခင်ကို နာခံမည့်အစား လူအုပ်ကြီး (သို့မဟုတ် ဘာသာရေးလူအုပ်) ပြုသမျှကို လိုက်နာသောသူများအပေါ် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၏ တရားစီရင်ချက်။
တတိယပုလင်းကို မြစ်များနှင့်စမ်းရေများပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသည်။ - ဖောက်ပြန်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောသောသူတို့အား ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တရားစီရင်ချက်။
စတုတ္ထပုလင်းကို နေပေါ် သွန်းလောင်းသည်။ – ဘာသာရေး အရေခြုံမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ပြင်းထန်စွာ ဟောပြောသောအခါတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ တရားစီရင်ခြင်း၏ ပြင်းပြသော အရှိန်ကို ပြသသည်။
ပဉ္စမပုလင်းကို သားရဲ၏ပလ္လင်ပေါ်၌ သွန်းလောင်းသည်။ - မြေကြီးပေါ်ရှိ စာတန်၏ပလ္လင်နှင့် အခွင့်အာဏာကို ဆန့်ကျင်သည့် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ တရားစီရင်ချက်များ- ဖောက်ပြန်သောဧဝံဂေလိတရားကိုနှစ်သက်သော လူဆိုးများ၏နှလုံးသားများ။
ဆဋ္ဌမပုလင်းကို ယူဖရေးတီးမြစ်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသည်။ – ဘာသာရေးအရေခြုံမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်၏ တရားစီရင်ချက်များသည် မှောက်မှားသောဘာသာတရား (ဗာဗုလုန်) သို့ စီးဆင်းနေသော စိတ်နှလုံးကို ခန်းခြောက်စေပြီး ကြောင်သူတော်၏စိတ်နှလုံးတွင် အမှန်တကယ်ရှိကြောင်းကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပြသသည်။
ခုနစ်ခုမြောက်ပုလင်းကို လေထဲသို့ သွန်ပစ်လိုက်သည်။ - လေ၏တန်ခိုးရှင်မင်းသား၊ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏စိတ်နှလုံးတွင်လုပ်ဆောင်သော မနာခံမှုစိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် မနာခံမှုအားလုံးကို ဆန့်ကျင်သည့် ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တရားစီရင်ချက်။
ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန် (ဘာသာရေးအရေခြုံမှု) ကို အပြည့်အဝ ထုတ်ဖော်ခဲ့သည် (အခန်း ၁၇)
ဝိညာဏဗာဗုလုန်သည် လုံးလုံးလျားလျား ဖျက်ဆီးခြင်း (အခန်း ၁၈)၊
သခင်ယေရှုသည် ဘုရင်တို့၏ ဘုရင်နှင့် သခင်တို့၏သခင်သရဖူကို ဆောင်းတော်မူ၏။ နှင့် သားရဲနှင့် ပရောဖက်အတုအယောင်ကို ငရဲထဲသို့ ချပစ်ခြင်းခံရသည်။ (အခန်း ၁၉)
ဧဝံဂေလိနေ့တစ်လျှောက်လုံး မာရ်နတ်၏လှည့်ဖြားသောအလုပ်သည် အပြည့်အ၀ဖော်ထုတ်ပြီး ငရဲထဲသို့ချခံရပြီး နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်းပလ္လင်ကို သတ်မှတ်ထားသည်။ (အခန်း 20)
ကောင်းကင်ဘုံရှိ ယေရုရှလင်မြို့သည် ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ (အခန်း ၂၁)
ဘုရားသခင်ရဲ့ ကောင်းကင်ပလ္လင်ကို ထင်ရှားစေတယ်။ နှင့် ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏နောက်ဆုံးသတိပေးချက်နှင့် သတိပေးချက်ပေးသည်။ (အခန်း ၂၂)